Home » Travel Associations News » Alain St.Ange dia manatevin-daharana ny hetsika SUNx .: "Fitsangatsanganana misy fiantraikany tsara ho an'ny planeta mangatsiaka kokoa"
Nandritra ny fivorian'ny UNWTO tao Chengdu, noheverin'ireo indostria roa ireo fa hanaiky ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa efa ela momba ny fitomboana sy ny kalitao ireo mpitarika indostrialy roa ireo, izay nampiasaina hatramin'ny daty ho an'ireo mpikambana birao mpanatanteraka ao Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany (ICTP).
Lipman - miaraka amin'ny ody fitarihana ao amin'ny IATA, WTTC ary UNWTO - dia fantatra amin'ny fiadiana ny tompondakan'ny Green Turismo nandritra izay 25 taona lasa izay, niaraka tamin'ny sakaizany sy ny mpampianatra azy, Maurice Strong, ilay lehilahy ao ambadiky ny UNEP, ny Vaomiera Brundtland, ary ny tany Rio Rio 1992 Summit. Nandritra ny fivoriambe, ny masoivoho Dho dia nidera an'i Lipman ho toy ny “Rain'ny ST-EP” amin'ny fandaharanasa fampihenana ny fahantrana ao amin'ny UNWTO.
St. Ange, vao avy tamin'ny fampielezan-keviny ho an'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO, dia nanaiky ny ho filoha lefitry ny SUNx the Strong Universal Network, miaraka amin'ny fiorenan'ny fiovan'ny toetr'andro, ny fifantohana amin'ny taranaka ho avy ary ny tambajotra valiny manerantany momba ny fahalalinan-tsaina. , fanavaozana ary faharetana. Nanaiky ihany koa izy hanampy amin'ny fampiroboroboana ny fihevitry ny SUNx momba ny Impact-Travel, ho modely iray amin'ny fiantraikany tsara sy ratsy horefesina ary tantanana mifanaraka tsara; miaraka amin'ny fitomboana maitso eo amin'ny fotony; ary 2050 Paris no voaporofo.
Nilaza i Lipman fa "ny SUNx dia hanangana vondron'olona tompon-daka haavo, tanora ary mahay diplaoma, ho lova ho an'ny vinan'i Maurice Strong, mba hitazomana ny zava-misy iorenan'ny fiovan'ny toetr'andro eo an-tampon'ny fandaharana stratejika ho an'ny sehatra misy antsika ary hanao mangatsiaka kokoa ny planetantsika. ”
St.Ange dia nilaza fa "Voninahitra ho ahy ny mandray anjara amin'ny maha filoha lefitra an'ny hetsika SUNx ahy.
Ity fiantraikany tsara ity - ilaina ny fitsangatsanganana ho an'ny misiona Cooler Planet. Nifoha izao tontolo izao mino ny fampandrosoana maharitra fizahan-tany. Hetsika lehibe ity ary ankasitrahana. Araka ny nolazain'i Dr Taleb Rifai, ny sekretera jeneralin'ny UNWTO tany Chengdu China nandritra ny fivoriamben'ny vondrom-bahoana "Sustainability is to Sustain Life" dia adidintsika ankehitriny mihoatra ny taloha no mitaky hery hamonjy ny planeta ataontsika ary amin'ny fanaovana izany maharitra ny fiainana " .
Fivoriamben'ny UNWTO: Nofintinin'i Alain St. Ange avy any Seychelles